Gọọmentị USA gbanwere egwuregwu EV.
Mgbanwe nke EV amalitela ugbu a, mana ọ nwere ike bụrụ na ọ nwere ntakịrị oge mmiri. Ọchịchị Biden kwupụtara ebumnuche maka ụgbọ ala eletriki mebere 50% nke ire ụgbọ ala niile na US ka ọ na -erule 2030 n'isi mbido Tọzdee. Nke ahụ gụnyere batrị, ngwakọ nkwụnye na ngwa eletriki ụgbọ ala eletrik ...
Kedu ihe bụ OCPP & Gịnị kpatara o ji dị mkpa maka nnabata ụgbọ ala eletrik?
Ụlọ ọrụ na -anya ụgbọ ala eletrik bụ teknụzụ na -apụta. Dị ka nke a, ndị na -ahụ maka saịtị chaja na ndị ọkwọ ụgbọala EV na -amụta ngwa ngwa na echiche dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, J1772 na nlele mbụ nwere ike ịdị ka usoro mkpụrụedemede na ọnụọgụ. Ọ bụghị otú ahụ. N'ime oge, J1772 wil ...
Ihe ị kwesịrị ịma mgbe ịzụrụ chaja ụlọ EV
Home EV Charger bụ akara bara uru iji nye ụgbọ ala eletrik gị. Nke a bụ ihe ise kachasị mma ịtụle mgbe ịzụrụ chaja ụlọ EV. NO.1 Ihe chaja dị mkpa Mgbe ị ga -etinye chaja Home EV n'èzí, ebe echekwabeghị ya na ikuku, ị ga -akwụrịrị ụgwọ ...
USA: Nchaji EV ga -enweta $ 7.5B na ụgwọ akụrụngwa
Mgbe ọtụtụ ọnwa nke ọgba aghara gasịrị, ndị otu Senate emesịa bịanye aka na nkwekọrịta akụrụngwa nke abụọ. A na-atụ anya na ụgwọ a ga-akarị ijeri $ 1 puku ijeri n'ime afọ asatọ, gụnyere na nkwekọrịta ekwenyero bụ ijeri $ 7.5 maka ihe egwuregwu ụgbọ ala eletrik na-atọ ụtọ. Karịsịa, ijeri $ 7.5 ga -aga ...
Joint Tech emebiela asambodo mbụ ETL maka Ahịa North America
Ọ bụ nnukwu ihe dị mkpa na Joint Tech enwetala asambodo mbụ ETL maka Ahịa North America na Mainland China EV Charger field.
GRIDSERVE na -ekpughere atụmatụ maka okporo ụzọ eletrik
GRIDSERVE ekpughere atụmatụ ya iji gbanwee akụrụngwa eletriki ụgbọ ala (EV) na UK, wee wepụta ụzọ okporo ụzọ eletrik GRIDSERVE. Nke a ga-ebute netwọk UK nke nwere ihe karịrị 50 'Electric Hubs' nke nwere chaja 6-12 x 350kW na nke ọ bụla, gbakwunyere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 300 rapi ...
Volkswagen na -ebunye ụgbọ ala eletrik iji nyere agwaetiti Gris aka akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ
ATHENS, June 2 (Reuters) - Volkswagen nyefere ụgbọ ala eletrik asatọ na Astypalea na Wednesde na nzọụkwụ mbụ iji tụgharịa njem ụgbọ mmiri agwaetiti Gris, ihe nlereanya gọọmentị na -atụ anya ịgbasa na mba ndị ọzọ. Prime Minista Kyriakos Mitsotakis, onye mere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ e ...
Akụrụngwa na -akwụ ụgwọ Colorado kwesịrị iru ebumnuche ụgbọ ala eletrik
Ọmụmụ ihe a na -enyocha ọnụọgụ, ụdị, na nkesa chaja EV dị mkpa iji mezuo ebumnuche ire ọkụ eletrik nke 2030 nke Colorado. Ọ na -akọwapụta mkpa ọha, ebe ọrụ, na chaja ụlọ maka ụgbọ ala ndị njem na ọkwa steeti wee tụọ ọnụ ahịa iji gboo mkpa akụrụngwa ndị a. Na ...
Etu ị ga -esi chajịa ụgbọ ala eletrik gị
Naanị ihe ị ga -akwụ ụgwọ ụgbọ ala eletrik bụ oghere dị n'ụlọ ma ọ bụ n'ebe ọrụ. Na mgbakwunye, chaja na -abawanye ngwa ngwa na -enye ụgbụ nchekwa maka ndị chọrọ nwụnye ike ngwa ngwa. Enwere ọnụọgụ nhọrọ maka chajịa ụgbọ ala eletrik na mpụga ụlọ ma ọ bụ mgbe ị na -eme njem. Ma chaja AC dị mfe ...
Kedu ihe bụ ọnọdụ 1, 2, 3 na 4?
Na ọkọlọtọ nchaji, a na -ekeji chaja n'ụdị akpọrọ "mode", nke a na -akọwa, n'etiti ihe ndị ọzọ, ogo nke nchekwa n'oge ịchaji. Ọnọdụ chaja - MODE - na nkenke na -ekwu ihe gbasara nchekwa n'oge chaja. N'asụsụ Bekee ndị a na -akpọ chaja ...
ABB ga -ewu ọdụ ụgbọ ala 120 DC na Thailand
ABB emeriwo nkwekọrịta site n'aka ndị na-ahụ maka ọkụ eletrik na mpaghara (PEA) na Thailand iji wụnye ihe karịrị ụgbọ elu 120 ngwa ngwa maka ụgbọ ala eletrik gafee mba ahụ na njedebe nke afọ a. Ndị a ga -abụ ogidi 50 kW. Kpọsị, a ga-etinye nkeji 124 nke ABB's Terra 54 chaja ngwa ngwa ...
Ebe nchaji maka LDV na -agbasa ruo nde 200 ma na -enye 550 TWh na Ọnọdụ Mmepe Nkwado.
site na nchịkwa na 21-05-05
EV chọrọ ịnweta ebe nchaji, mana ụdị na ọnọdụ chaja abụghị naanị nhọrọ nke ndị nwe EV. Mgbanwe teknụzụ, amụma gọọmentị, atụmatụ obodo na ike ọkụ niile na -ekere òkè na akụrụngwa chaja EV. Ọnọdụ, nkesa na ụdị eletriki vehi ...